Guddiga Federaalka Hirgellinta Doorashooyinka dadban oo ka hadlay doorashada aqalka Hoose | Kismaayo24 News Agency
Guddiga Federaalka Hirgellinta Doorashooyinka dadban oo ka hadlay doorashada aqalka Hoose
Sunday October 23, 2016 - 7:42 under Somali News by admin
Guddoomiyaha Guddiga Federaalka Hirgellinta Doorashooyinka dadban, Abuukaate Cumar Maxamed Cabdulle (Cumar Dhageey) oo shir jaraa’id ku qabtay Muqdisho ayaa ka warbixiyay hanaanka loo dooranayo aqalka Hoose iyo sida ay wax u socdaan.
Guddoomiyaha oo la hadlay Warbaahinta Qaranka ayaa sheegay inay meel wanaagsan mareyso doorashooyinka aqalka Hoose, isla markaana inta badan dowlad goboleedyada ay soo xareeyeen ergooyinka soo dooran lahaa Xildhibaannada aqalka Hoose.
“Ilaa iyo hada ergooyinka la xareeyay, waxaa ugu horeeya dowlad goboleedka Jubbaland oo soo dhameystirtay dhamaan 43 kursi ergooyinka, waxaa kaloo soo diyaariyay dowlad goboleedka Koofurgalbeed oo 57 kursi ergooyinkooda, waxaa soo sedexaaye oo 37 kursi laga rabay, soo diyaariyay 31 kursi, Galmudug 20 kursi ergadooda ayaa diyaar ah, waxaa kaloo diyaar ah 20 kursi oo dhanka Puntland, waxaana rajeyneynaa in la soo dhameystiri doono guud ahaan inta dhiman” ayuu yiri Cumar Dhageey.
Guddoomiyaha guddiga Federaalka Hirgellinta Doorashooyinka dadban, Abuukaate Cumar Maxamed Cabdulle (Cumar Dhageey) oo la weydiiyay rajada laga qabo in doorashada ay ku dhacdo waqtigii loogu talagalay ayaa ku jawaabay.
“Rajada aad bay u muuqataa, marka aad ka qiyaas qaadan karto doorashadii aqalka sare, waqtigii loogu talagalay qaar way ku dhacday, waqti ku dhawna kuwa kale ayaa la qabtay, hada waxaa diyaar ah goobihii codbixinta, howlwadeenadii shaqada qaban lahaa waa diyaar, mar haddii ay howsha socoto, waxaan qabnaa in ay ku dhamaan doonto waqtigii loogu talagalay, ama mid aan ka fogeyn”.